Ị nwere ike igosi m ezigbo ngwá ọrụ iji bulie ahịa Amazon?
Tupu anyị amalite, ka anyị chee ya ihu - nchịkọta ngwaahịa gị nwere ọtụtụ ihe iji soro na jikwaa maka gị iji merie ahịa Amazon na-eme ya naanị ya. Ọ ga-abụ ọrụ a na-apụghị ịchọta ma ọ bụ ọbụna na-enweghị ike ịmata, ọ gwụla ma ị ga-enyere onwe gị aka iji nyochaa nyocha na nyocha. N'ụzọ dị mwute, e nwere ọtụtụ ngwanrọ dị iche iche dị ugbu a n'ahịa. Ọ bụ ezie na ọdụ ọdụm nke ndị enyemaka ndị a n'Ịntanet nwere ike iji n'efu, ụfọdụ n'ime ndị kachasị ike na-enye nsụgharị ha zuru oke na ụgwọ akwụ ụgwọ. Na agbanyeghị, ebe a bụ atọ m kachasị elu gosipụtara ngwọta na arụmọrụ a gosipụtara iji kwalite akụ Amazon gị ma mee ka ihe ndị ọzọ dị mfe karị - oregon computer cables.
Feedback Genius - ga-abụ nzaghachi nke ọma na usoro nyochaa na Amazon nke na-emetụta maka ime ka onye ọ bụla zụrụ ya zuru ezu, N'ezie, ọ bụrụ na ịchọọ ịchọta ndepụta ngwaahịa gị wetara na ala nke ọchụchọ ahụ n'ebe ahụ. Ngwá ọrụ a na-arụ ọrụ dị ka anwansi, ebe ụjọ na-atụ m maka mmejọ ọ bụla na-ekwu na ọ ga-eme ngwa ngwa tupu ya enwee ike ịkwụsị ọrụ ọjọọ m. Kedu ihe ọzọ - ị nwere ike iji Nzaghachite Nzuzo iji mee ka ozi ịntanetị rụọ ọrụ site na ịrịọ arịrịọ maka ndị na-azụ ahịa ọhụrụ - naanị ịjụ ka ị kwụsị nzaghachi ma ọ bụ nyochaa dị mma. Ọ na-arụ ọrụ, n'ihi na ịnọgide na-enwe afọ ojuju nke ndị ahịa abụwo ụzọ dị irè - ọ bụghị nanị iji mee ka ahịa Amazon dịkwuo elu, na-eme ka ọ bụrụ ọrụ ọ bụla.
Jungle Scout - nwere ike ịghọ ihe ngwọta kasịnụ iji bulie ahịa Amazon maka ndị ahụ na-ere ahịa na-achọpụtaghị ihe ọhụrụ maka ngwaahịa ọhụrụ, ọnụọgụ mgbanwe ma ọ bụ nkesa nke ọma iji nọrọ na ya a na-achịkwa asọmpi n'ezie. Nọgide na-emelite onwe gị, echefulakwa ohere ohere ị na-eche, ọ dịkarịa ala oge ruo n'oge. Kedu ngwaahịa ndị dị n'elu ahịa na Amazon ugbu a? Kedu niche ndị na-adịbeghị anya nwekwuo ọnụ? Kedu ụdị ngwaahịa ọhụụ a na-achọrịrị nke ọma na ọ dị ọnụ ahịa na-egosi na ndepụta ngwaahịa gị? Jungle Scout bụ ezigbo nchedo niche nke ga - enyere gị aka ịmeghe ọwa mmiri ọhụụ nke zoro ezo iji mee ka ahịa Amazon gị dịkwuo mma ma nọgide na-agba ọsọ n'ihu ndị ahịa gị.
Igodo - nhọrọ ọzọ dị ukwuu iji mee ka Amazon ahịa site na nnyocha ngwaahịa na-edozi ụzọ ziri ezi. Ana m ekwusi ike na ọ dịkarịa ala na-anwale ngwá ọrụ a iji nweta ụfọdụ n'ime uru ndị a: nsụgharị na-emepụta okwu na okwu ọchụchọ nke ndị na-asọmpi gị maka ọdịmma nke gị, ezigbo njikarịcha mma maka mkpọsa PPC, nghọta bara uru na mkparịta ụka dị ike, ị ga-aga n'ókè dị elu ma nweta oke asọmpi nke ị ga-atụba n'ime, na ọbụna karịa. E kwuwerị, ya na atụmatụ njikwa ihe ize ndụ ya na nhọrọ atụmatụ ahịa. A na-ejikarị arụ ọrụ eme ihe dịka ụlọ ahịa na-echere ọbụna site n'aka ndị ọkachamara kachasị amara na Amazon.